[Topnews:-] Xildhibaanad Ubax Tahliil oo fadeexadii aduunka hareeysay kadib markii ?
Monday October 09, 2017 - 15:50:34 in Wararka by Super Admin
Xildhibaanad Ubax Tahliil oo u dhalatay beesha Sacad Habargidir ayna soo doorteen 52 qof oo u dhashay beesha Cawareere Sacad ayaa noqotay Xildhibaanadda ugu liidata ee guud ahaan Xildhibaanadda beelaha Habargidir iyo Duduble.
Xildhibaanad Ubax Tahliil oo ku fashilantay inqilaabkii ay daaha gadaashiisa ka maamuleeysay ee Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle lagu inqilaabi rabay ayaa maanta Hotel Safari Muqdisho iskuugu geeysay Odayaal iyo dhalinyaro u dhashay beesha Sacad Habargidir kuwaas oo ay u qeeybisay lacag dhan toban kun dollar oo Ra’isulwasaare Kheyre u dhiibay.
Odayaashii ka qeybgalay oo la yaabay iimaan la’aanta iyo caqli xumadda Ubax Tahliil oo dhaxalkii Aabaheed kula heshiin weeysay walaalahii la dhashay ayaa yiri :-
Ujeedka Ubax Tahliil lacagta noogu qeeybisay waxeey noogu sheegtay laba ujeedo.
1. Raysulwasaaraha ayaan idin gaynayaa waxaad ku tiraahdiin Ubax ayaa siyaasadda wakiil nooga ah !
2. Raysulwasaaraha hortiisa ka sheega in Xaaf dhacay ayna taageersan yihiin Xukumadda Kheyre iyo sida ay wax u rabto arrimaha Galmudug la xiriira ?
Ololahaan ayaa ku soo beegmaya xilli Ubax Tahliil ay hareeysay fadeexad la xiriirta iney sameeysay gogol dhaaf lagu qabtay.